Hoyga - Fudud oo Fudud oo Daah-Kicid EMD Software ah (Saxiix Dynamic)
Easy Easy Display EMD Software (Saxiixyo Weyn)
Xalka saxiixista dhijitaalka ah ee aadka loo awoodi karo suuqa.
Fanka & Tafaariiqda
Dawada & Caafimaadka
Makhaayadaha & Maqaayadaha
Safarka & Dalxiiska
Kuwa ugu jaban suuqa.
Haddii aad tahay ganacsi yar ama shirkad weyn, Easy Multi Display wuxuu kuu fududeynayaa inaad ku soo bandhigto farriimahaaga muuqaallada badan. 1 liisanka, waxaad ku soo bandhigi kartaa ilaa 24 ilo kala duwan oo warbaahineed hal mar, guud ahaan 6 bandhigyo kala duwan. Nagala hadal xalka shirkadeena ee xulashooyinka soo bandhigida aan xadidneyn.
Dejinta kumbuyuutar iyo bandhigyada TV-ga.
Ku rakib Fudud Software Multi Display Easy.
Hubso dejimahaaga soo-bandhigga.
Easy Multi Display waa urur kasta oo raba inuu soo bandhigo macluumaadka dijitaalka ah macaamiishooda iyo martidooda.
Maqaayadaha & Makhaayadaha
Dukaamada Farshaxanka & Raaxada
Soo dhaweynta dijitaalka ah
Muuji ilaa 24 aag warbaahin oo gaar ah
Cusbooneysiinta Software ee Cloud
Cusbooneysiin Bilaash ah 12 Bilood
1 Tababar saacadeed oo khadka toosan ah oo ay la socdaan shaqaalaha taageerada
Rakibaadda Goobta & Taageerada
Nagala soo xiriir sicirka.
Macaamiisheena kaliya waxay jecel yihiin sida ay u fududahay inay ku soo bandhigaan warbaahintooda Easy Multi Show. Interface-ka softiweerka wuxuu kugu hagiyaa habka qaabeynta talaabo talaabo talaabo ah, adiga oo ku weydiinaya su'aalaha saxda ah oo dhan. Uma baahnid inaad noqotid tikniyoolajiyad teknolojiyadeed si aad ula kacdo ulana shaqeysid Easy Multi Display.
Qalabka fudfudud ee muujinta 'Multi Multi Display' ayaa kugu hagaya habka dejinta.
Kaydi qaabaynta muuqaallada badan oo aad si fudud ugu rakibto.
​Xulashada luqadda: Ingiriisiga, Faransiiska, Isbaanishka ee horumarka ...
Ma u baahan tahay caawimaad dheeri ah oo dheeri ah? Fiiri Qorshahayaga Qiimaha Sicir-bararka kaas oo la yimid tababar iyo taageero kombuyuutar oo 1 saac ah.
Ma waxaad dooneysaa dalabyo iyo qiima dhimis?
Bandhig Fudud oo Kordhin Badan
Copyright © 2020 Easy Easy Display EMD Software (Saxiixyo Weyn)
Salaan, Sideen kuu caawin karaa?